पठाओ दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाले क्षतीपुर्ती पाउँछन् की पाउँदैनन् ? | Butwal Dainik
पठाओ दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाले क्षतीपुर्ती पाउँछन् की पाउँदैनन् ?
उनले मृत्यु भएकाहरुका लागि ५ लाखको बिमा गरिएको र घाइतेको लागि १ लाखको बिमा भएको बताएकी छन् । सोही अनुसारको क्षतीपुर्तीवारे छलफल भएको उनको भनाई छ । ओम जनता यातायात प्रालिमा आवद्ध बसका चालक सुमन कार्कीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीले पक्राउ गरेको छ । ओम यातायात प्रालीले भने क्षतीपुर्ती दिने विषयमा आनाकानी गरेको पी डित को भनाई छ ।